‘लभ लभ लभ’ मेरा लागि एउटा परीक्षा
मङ्गलबार, जेठ ८, २०७५
'पशुपति प्रसाद' निर्देशक दीपेन्द्र भन्छन्:
काठमाडौं, चैत २९
निर्देशक दीपेन्द्र के खनाललाई ‘पशुपति प्रसाद’ले बेग्लै उचाइ प्रदान गर्‍यो।
फिल्ममा रहेको ‘पशुपति प्रसाद’ पात्र दर्शकको मनमा स्थापित भयो। उनी फेरि एक पटक सोही दोहोर्‍याउने तयारीमा छन्।
उनी वैशाख १ गते रिलिज हुन लागेको ‘लभ लभ लभ’ फिल्मका कारण हौसिएका हुन्।
केही संचारकर्मीले हल ट्रायलका बेलामा फिल्म हेरेर दिएको तारिफले उनी उत्साही बनेका छन्।
‘स्क्रिप्टमा विश्वस्त भएर फिल्म बनाएको हूँ। फाइनल कट हेरेपछि संमग्रमा निस्केको आउटपुटले मलाई अझ उत्साहित र प्रफूल्ल बनाएको हो। हेर्नेहरूको प्रतिक्रियाले त्यो केहि बढेको भने पक्कै हो’, उनले भने।
फिल्मले दर्शकको मन टक्क छुने उनको दाबी छ।
दीपेन्द्रका अनुसार ‘लभ लभ लभ’ एकदमै तरोताजा फिल्म हो। यसलाई बुझ्न दर्शकले टाउको दुखाउनुपर्ने छैन्।
उनी फिल्म हेरेका साथीहरूको जस्तै प्रतिक्रिया दर्शकबाट पनि पाउने आशामा छन्। यसको पछाडी कारण यस्तो छ।
‘साथीभाइलाई जस्तै दर्शकलाई छोयो र भयो भने फिल्म प्रेमकथाहरूमा एउटा कोशेढुगां बन्छ’, उनले भने।
उनको पछिल्लो रिलिज ‘चपली हाईट २’ दर्शकको नजरमा ‘पशुपति प्रसाद’ जस्तो नभएकोमा उनले फिल्म नराम्रो बनेको भन्दा पनि त्यो प्रकारका फिल्म हेर्ने संख्या कम भएकाले भएको बताए।
‘त्यो बेगल फिल्म थियो, एउटा तप्काका दर्शकका लागि थियो। विशेषत: त्यो मल्टिप्लेक्समा फिल्म हेर्न सिमित दर्शक समूहका निम्ति थियो। जुन समूहले हेर्नुपर्ने हो त्यो समूहले फिल्म हेर्‍यो जसमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आए। एउटा वर्ग त्यसमा आकर्षित भयो।’
तर, ‘लभ लभ लभ’ सबैलाई छुनेमा उनी विश्वस्त छन्।
‘मलाई शब्दले भन्दा भावनाले बढी छुन्छ। भावना बुझिसकेपछि शब्दमा त्यसलाई फेरि व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन्। ‘लभ लभ लभ’ले पनि त्यस्तै गर्छ।’
पहिलो फिल्म राजेश हमाल जस्ता स्टार लिएर गरे। त्यो फिल्मले उनलाई उकासेन। तत:पश्चातका फिल्ममा उनले खास चलेका कलाकार लिएनन्। नयाँ अनुहारले नै प्राथमिक्ता पाए र पाइनै रहेका छन्।
उनको जवाफ थियो, ‘फ्रेसनेस।’
‘चलेका अनुहार लिदां उनीहरूले त्यसअघि गरेका कामसँग तुलना हुन्छ, जसमा अलिकति तलमाथि हुन पुगेको खण्डमा फिल्म हेर्दा मजा हुन्न। नयाँ लिदां दर्शकका लागि त्यही नै हो भन्ने भान पार्न सकिन्छ। म आफू पनि नयाँ नयाँ कथा खोज्छु र त्यसमा नयाँ कलाकारलाई लिएर काम गर्न रुचाउँछु। स्वस्तिमा र सुरजले फिल्ममा त्यस्तै काम गरेका छन्।’
नयाँ काम गर्ने रूचिकै कारण ‘लभ लभ लभ’ उनी आफैका लागि एउटा परिक्षा हो। पूर्णरूपमा प्रेमकथा भएको पहिलो फिल्म भएकाले उनलाई त्यस्तो लागेको हो।
‘मैले आजसम्म शतप्रतिशत प्रेमकथामा फिल्म बनाएकै छैन्। यो मेरा लागि नयाँ हो। निर्देशकका हिसाबले मैले केहि नयाँ चिजमा काम गरिरहेको छु भने म पनि नयाँ हो।नयाँ काममा परिक्षा त हुन्छ नै।’
त्यस्तै दीपेन्द्रले आफ्ना पछिल्ला फिल्मको सफलता र असफलतालाई रिलिज हुन लागेको फिल्मसँग जोडेर हेर्ने कुरामा उनी पक्षपाती रहेको बताए।
‘मेरा लागि हिजोको भन्दा पनि आजकोले विशेष अर्थ राख्छ।’
दीपेन्द्रको फिल्मसँग अन्य दुई फिल्म ‘घामपानी’ तथा ‘राधे’ लाग्दैछन्। यी दुई फिल्म मध्ये ‘घामपानी’मा दयाहाङ र केकी छन् भने अर्कोमा सिङ्गल स्क्रिनमा रूचाइने निखिल उप्रेती छन्। यस्तोमा उनको फिल्ममाथी पर्ने सम्भावित प्रभावको बारेमा उनी यस्तो सुनिए।
‘पक्कै पनि फिल्मको सुरूवाती व्यापारमा यी चिजले ठूलो अर्थ लाग्छ। यो हल बाँडफाँडसम्म पनि प्रभावी छ। चलेको स्टारमा दर्शकको अलिकति आकर्षण चाँहि हुन्छ। त्यस हिसाबले हल र हलको शोहरूको बाँडफाडमा एउटा असर गर्छ र गरिरहेको पनि छ। सर्सर्ति हेर्दा यो फिल्मको खम्बा म नै हुँ। फिल्मबाट दर्शकमाझ म नै बढि चिनिएको अनुहार हो। त्यसैले पनि फिल्मका लागि मेरो दौडधुप अलि नै बढि छ। चलेको अनुहारको हिसाबले बढि नै रिस्क त यो फिल्मलाई छ।’
‘पशुपति प्रसाद’ दोस्रो सातामा पुगेपछि उकालो लागेको थियो। यसपटक पनि दीपेन्द्र फिल्म दर्शकको प्रतिक्रियाबाटै हलमा प्रभावी हुनेमा आशावादी छन्।
दीपेन्द्रले आफूले आफ्ना फिल्म सँधै एउटा दर्शकका हिसाबले नै हेर्ने गरेको बताए। उनले फिल्म प्रतिक्रिया पनि दर्शकको नजरले नै निर्माण गर्ने गरेको भने।
त्यही कोणबाट उनले बनाइसकेपछि ‘लभ लभ लभ’लाई हेरिसकेका छन्।
‘म मेरो फिल्म मैले बनाएको हो, राम्रो मेहेनत गरेको छु भन्दा पनि दर्शकका हिसाबले कस्तो फिल्म बन्यो भनेर हेर्छु। यो फिल्म हेरेर दुई पटक नै रोएँको छु। फिल्मको कथाबस्तु सबै थाहा हुँदाहुँदै म त रोएँ भने पहिलो पटक हेर्ने दर्शक अवश्य पनि रूनुहुन्छ।’
उनको फिल्ममा निर्माताका छोरा हिरो बनेका छन्। यस्तो प्रवृतिले चर्को आलोचना खेप्ने गरेको छ। दीपेन्द्र स्वयंम पनि यो प्रवृतिलाई ठीक मान्दैनन्।
उनको असहमति यसमा ‘व्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ भन्दा पनि ‘ग्रे’ छ।
‘पैसा मात्रैको हिसाबकिताबले लागिन्छ भने तरिका ठीक हैन्। तर, पैसा पनि छ कला पनि छ भने त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन्। सबैले संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कहिँ पनि लेख्या छैन्।’
दीपेन्द्रको अनुसार ‘लभ लभ लभ’का मुख्य कलाकार सुरज पाण्डे त्यस्तै कलाकार हुन्। उनले फिल्ममा आफ्नो चरित्रमा उनी जसरी भिज्नुपर्ने हो त्यसरी नै भिजेका छन्। फिल्मको रिलिजपछि दर्शकले ‘पैसा हालेको’ भन्ने पदावली विर्सेर कलाकारका रूपमा चिन्नेमा उनी विस्वस्त छन्।
उनले दाबी गरे, ‘फिल्म हेरिसकेपछि दर्शकले उसलाई नै मिस गर्छन्।’
प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, चैत २९, २०७३ ०९:१८:०९
कहाँ गए मेरा बालसखाहरू?
पुँजीबजार जुवा कि लगानी?
अभियोग लाग्दैमा सांसद किन निलम्बन हुनु हुँदैन?
फेसबुक धेरै चलाउनुहन्छ? मानसिक रोगी हुनु होला!
केपी शर्मा ज्ञवाली
सुन तस्करीका सहयोगी ‘ववुराहरु’ मात्रै हैन, संरक्षकहरु पनि समातिनु पर्छ
सचेत हुने पालो पुरुषको
चन्द्रवीर तुम्बापोका प्रिय ५ पुस्तक
दर्ता नम्बर- ५६१/ २०७४-७५
प्रकाश - 9851123339, 9801123339, 01-5531040